Factory -. Ningbo NFC CHEMICAL CO, LTD
For kubvunza pamusoro zvinhu zvedu kana pricelist, ndapota kusiya email nesu uye isu tichava nekuonana mumaawa 24. Inquiry For Pricelist
4-Amino-3-phenylbutyric asidhi (Phenibut)
Phenibut rinoshandiswa kuRussia somunhu mishonga mushonga kubata-siyana zvirwere, kusanganisira kuzvidya mwoyo, asthenia, kushaya hope, udhakwa, posttraumatic kunetseka chirwere, chokundandama, uye vestibular zvirwere ...
HTA chinhu phenolic akakura. Hydroxytyrosol garo kakawanda rinowanikwa muorivhi plant.The kuwedzera acetate kuwedzera hydroxytyrosol sezvo bioavailability. Hydroxytyrosol ndeimwe yenzvimbo cellular utano simba ...
Curcumol ndiye yakachena monomer kure Rhizoma Curcumaeis pamwe antitumor mabasa. Hazvina Anti-anogumbura uye antiproliferative mumiririri. Kuchititadzisa LPS Kutemeswa NO kugadzirwa Nokudzvinyirira iNOS mRNA okuti.
Isoxepac waenda zvenguva pamusoro Olopatadine, Olopatadine chinhu antihistamine (uyewo anticholinergic uye rechikepe muchitokisi stabilizer), akatengesa sezvinoita donhwe mushonga ziso kugadzirwa nevanhu Alcon mune imwe matatu zvinokwaniswa: ...
Kushanda yechitatu unhu labortary, NF ...